Posted Date: 24 Apr 2018 in: news,Puntland,Somalia 0
Wasiirka arrimaha dibedda iyo Iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Amb; Axmed Ciise Cawed iyo Safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya Olgan Bekar, ayaa ka wada hadlay habka loo xoojin karo wada shaqaynta Labada Dal.
Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Mursal Sh.C/Raxmaan ayaa maanta iska casilay xilka Wasiirka gaashaandhigga,waxaana uu isu diiwaangeliyay tartanka guddoonka Golaha shacabka Soomaaliya.
Wasaaradda Warfaafinta ee Puntland ayaa qaadacday qodobada kasoo baxay Shirkii Bedqabka Suxufiyiinta oo maalintii shalay ahayd lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho.
Golaha Guurtida ee maamulka Somaliland ayaa waxa ay shaqo joojin ku sameysay Xildhibaan ka qeybgalay munaasabas dhaqan oo ka dhacday magaalada Carmo ee gobolka Bari.
Posted Date: 23 Apr 2018 in: news,Puntland,Somalia 0
taliyaha ciidamadda badda Puntland admiral Cabdirisaaq diiriye Faarax ayaa Kormeer shaqo ku tegay xerada ciidamada PMPF ee jiida sugure ee buuraha galgala, halkaasi oo uu ka socdaan abaabul howlaha ciidanka
Magaaladda Gaalkcyo ee Xarunta Gobalka Mudug waxaa maanta soo gaaray Musharax Madaxweyne Puntland Gen Maxamed Siciid Xirsi Morgan oo maalhan safaro dhulka ah ku marayeey degaanadda Puntland.
Waxaa maantay si rasmi ah u shaaciyay in uu xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka u tartamayo Xildhibaan C/casiis Xassan Maxamed (Lafta Gareen) oo ka mid ah Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Lafta-gareen ayaa Musharaxnimadiisa ku shaaciyay shirjaraa’id oo uu maantay ku qabtay magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna Duqa Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow) oo kulan gaar ah la qaatay Agaasime Gobolleedka Machadka Dimuqraadiyadda iyo Doorashooyinka Afrika Mudane Justin Duo Gore ayaa sheegay in dhawaan la bilaabayo wacyi-gelinta ku saabsan hannaanka ay dadka Gobolka Benaadir u soo dooranayaan goleyaasha degmooyinka.
Posted Date: 22 Apr 2018 in: news,Puntland,Somalia 0
Maamulka Machadka Imaamu AlAlbaani ee Barashada culuumta shareecada
islaamka iyo ku hadalka luqada carabiga ayaa Gudoonsiiyey Shahaadooyin
Dufacdii koowaad ee Ardayda ka Qalin jabisey Machadka imaamu AlAlbaani
ee Magaalda Baargaal.
Beesha Dashiise oo kamid ah Beelaha daga Magaaladda Boosaaso ee gobalka Bari ayaa maanta kulan ay Boosaaso ku yesheen waxay kaga horyimadeen hadalki uu maalmo kahor Boosaaso kasheegay Madaxweyne Gaas ee ahaa Howlaha Imaraadka uu ka hayo Puntland.
Wasiirkii hore ee wasaarada dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland C/laahi Jaamac Saalax iyo Wasiirkii hore ee Duulista hawada iyo garoomada Xasan Xaaji Siciid ( Xasan Cadde) ayaa qoraal ay si wadajir ah u soo saareen waxay kaga jawaabeen Hadal uu madaxweynaha Puntland ka jeediyay Kulan ka dhacay Beerta Rays ee magaaladda Boosaaso toddobaadkii hore.
Dekada Muqdisho waxaa taagan Markab lagu Magacaabo (JABAL ALI 7)uu leeyahay imaaraadka Carabta kaas oo la doonayo in lagu raro Qalabka milateri ee Imaaaradka ka yaalla gudaha Magalada Muqdisho.
Dhegayso:- Cumar Cabdirashiid: “Heshiiska Dekedda Berbera xukuumaddayda ma saxiixin”
Dhegayso:- Wakiilka Cusub ee Puntland u Magacwday Sweden oo ka hadlay Waxqabadkiisa
Akhriso:-Waqtiga Ay Dhaceyso Doorashada Guddoomiyaha Golaha Shacabka Iyo Shuruudaha Musharixiinta Oo La Shaaciyey
Dhegayso:- Wasiir Beyle: “Lacagta Imaaraatku Keenay Waxay Timid Xilli aan Shaki qabnay”
Posted Date: 21 Apr 2018 in: news,Puntland,Somalia 0
Xaflad sagootin ah oo loo qabtay Dufcadii 3-aad ee Sanadkan ka qalin jabinaysa Dugsiga Sare ee Maxamed Xuseen ee Degmada Baargaal
xaflad Sagootin ah oo si heer sare ah loo soo agaasimay oo loo qabtay
Dufcadii 3-aad ee ardayda ka qalinjabinaysa sanad dugsiyeedkan Dugsiga
sare ee Maxamed Xuseen ee Degmada Baargaal ayaa maantay lagu qabtay